स्वास्थ्यकर्मीमाथि अपराधीलाई झैं केरकार गर्ने को हुन् ? (भिडियोसहित) | Hakahaki
स्वास्थ्यकर्मीमाथि अपराधीलाई झैं केरकार गर्ने को हुन् ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । निकै अप्रिय घटना घटेपछि अपराधी/दोषी/कसुरदार र अपराधसम्बन्धी प्रमाण पत्ता लगाउन अनुसन्धानमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले जस्तै केरकार गरेको एक भिडियो शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।
उक्त भिडियोमा गाडीमा एक पुरुष र एक महिला यात्रा गरिरहेको देखिन्छ । यो कुनै नाटकको दृष्य नभएर काठमाडौंको नागढुङ्गा चेकपोष्टमा काठमाडौं प्रवेश गर्न लागेको एक गाडीलाई रोकेर केही युवाले गरेको चेकजाँच/केरकार थियो ।
गाडी रोकेर केरकार गरिएको भिडियोको सम्बाद यस्तो थियो :
केरकार गर्ने व्यक्ति : तपाईंहरुको गाडीमा ल्याएको व्यागमा जुन छ नि, ल्याएको सामग्रीहरु देखाउनुस् । त्यो सामान ठ्याक्कै देखाउनुस् है । ठीक छ तपाईं नियमसम्मत तरिकाले आउनुभएको छ । तपाईं पनि स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ । तपाईंहरुले जे गर्नुभएको छ हाम्रो लागि गर्नुभएको छ, हामीले सोचेका छौं । हामीले गरेको काम पनि तपाईंकै लागि गरेका छौं ।
केरकार गर्ने व्यक्ति : ओके, यो व्याग चेक गरौं है त । ह्वाँले देखाउनु हुन्छ । अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन के दिज्यू, हामीले गरेको तपाईं कै लागि हो । यो हजुरहरुकै लागि गरेको हो ।
केरकार गर्ने व्यक्ति : तपाईंको व्यागको सामग्रीहरु देखाउनुस् त । अलि दूरी कायम गरौं है ।
व्यागको सामान हामीले चेक ग¥यौं है, नागरिकका हिसाबले । (गाडीमा सवार व्यक्ति, झोला खोलेर देखाउँछन् । आफ्नो कपडाहरु भएको बताउँछन् ।)
केरकार गर्ने व्यक्ति : राम्रोसँग देखाउनुस् है ! ल अर्को स्यानो व्याग पनि खोल्न मिल्छ भने खोल्नुस् है ।
(व्यागमा कोरोनासम्बन्धी किताब हुन्छ, सवार व्यक्ति व्यागमा रहेको बुक देखाउँछन् र उनले भन्छ, “यी यही कोरोनासम्बन्धी बुक, यी ल्याप टप छ ल !”
केरकार गर्ने व्यक्ति : तपाईंलाई एउटा कुरा सोध्छु है त ।
गाडीमा सवार व्यक्ति : हुन्छ ।
केरकार गर्ने व्यक्ति : तपाईंको शुभ नाम भन्नुस् ?
गाडीमा सवार व्यक्ति : नारायण कार्की ।
केरकार गर्ने व्यक्ति : तपाईंको पद, तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ ?
गाडीमा सवार व्यक्ति : म प्रदेश ३ को डाइरेक्टर, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको ।
केरकार गर्ने व्यक्ति : तपाईं स्वास्थ्यसँग नजिकबाट जोडिनुभएको मान्छे; तपाईं संक्रमणबाट बच्ने उपाय पनि सिकाउनु हुन्छ है ? विभिन्न जनचेतमुलुक कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्छ ?
गाडीमा सवार व्यक्ति : हजुर, अँ ।
केरकार गर्ने व्यक्ति : तपाईंको मुखमा मास्क खै ?
गाडीमा सवार व्यक्ति : तपाईंसँग बोल्ने बेला खोलेको । (उनले नजिकैबाट सिटमा रहेका मास्क लगाउँछन् ।)
केरकार गर्ने व्यक्ति : तपाईंले स–सानो कुरामा केयर गर्नु पर्दछ कि पर्दैन ? यदि म संक्रमित व्यक्ति भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईं ?
गाडीमा सवार व्यक्ति : लाग्थ्यो मलाई ।
घटनाको सन्दर्भ : प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बागमतीका निर्देशक नारायण कार्की शुक्रबार हेटौंडाबाट काठमाडौं फर्कँदै थिए ।
कार्की कोरोना परीक्षणका लागि हेटौंडामा भर्खरै सञ्चालनमा ल्याइएको ल्याबको व्यवस्थापन सकेर काठमाडौं फर्किएका हुन् । उनलाई यसरी केराकार गर्नेलाई प्रशासनले आवश्यक कारवाही गर्नु पर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रुपमा उठेका छन् ।
केहीले पत्रकार हुन् कि भनेर अनुमानका भरमा सामाजिक सञ्जालमा सञ्चारकर्मीमाथि आक्रोश पोखेका छन् । तर, केरकार गर्ने व्यक्ति नत पत्रकार नत सुरक्षाकर्मी केही नभएको पाइएको छ ।
आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने ती व्यक्ति उत्तम कार्की रहेको बुझिएको छ । उनीसहित केही युवाले निर्देशक कार्कीको गाडीलाई रोकेर अनुसन्धानमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले जस्तै केरकार गरेका थिए । सामाजिक अभियान्ता भनेर चिनाउने ती उत्तम कार्की नामका युवाले उक्त केरकार फेसबुकबाट लाइभ गरिरहेका थिए ।
ती युवाको समूहले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार र अवरोध भएपछि निर्देशक कार्की शुक्रबार हेटौँडा नै फर्किए । उनी शनिबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका छन् । यतिबेला केरकार गर्ने ती युवाहरुमाथि कारवाही हुनुपर्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।